पत्रकार भोजराज थापालाई गाउलेहरुले कु'टेर ल'खेटेकै हुन् त ? वास्तविकता यस्तो रहेछ - Reel Mandu
पत्रकार भोजराज थापालाई गाउलेहरुले कु’टेर ल’खेटेकै हुन् त ? वास्तविकता यस्तो रहेछ
चितवन जिल्ला राप्ती नगरपालिका वडा न ०३ कि सुजिता भण्डारी घर बाट सम्पर्क बिहिन भएको ९ दिन पछि जंगलको झाडीमा मृत फेला परिन। उनि मृत फेला परेपछि उनको घटनासंग सम्बन्धित रहेर हराएको दिन देखि परिवारको साथ् सहयोगमा पत्रकार भोजराज थापाले नियमित रिपोर्टिङ्ग गर्दै आएका थिए।
यहि घटनासंग सम्बन्धित रहेर अहिले पत्रकार भोजराज थापालाई केहि व्यक्तिहरुले विभिन्न झुटा आरोप लगाएर अर्काको दुखका आशु बेचेर डलरको खेति गरिरहको छ साथै मृतक सुजिताकी आमासंग अन्तरवार्ता लिदा रोएर इमोसनल हुन लगाएको जस्ता गम्भीर आरोपहरु लगाएका छन्।
त्यतिमात्र हैन पत्रकार भोजराज थापालाई गाउले मिलेर गाउ बाट नै लखेटियो जस्ता शिर्षकमा सामाजिक संजाल हुदी भ्रामक समाचारहरु भाइरल भैरहेका छन्। यस्ता भ्रामक समाचारले पत्रकार भोजराज थापाको केहि व्यक्तिहरुले चरित्र हत्या गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ।
पत्रकार भोजराज थापाका अनुसार मृतक सुजिता हराएको दिनदेखि नै उनका परिवार र गाउलेहरुले उनलाई रिपोर्टिङ्ग गर्न बोलाएका हुन्। उनले मृतक सुजिताको आमासंग अन्तरवार्ता लिदा अन्य गाउलेहरुले पनि भिडियो गर्नुभएकाले उनले उक्त अन्तरवार्तामा काही कतै पनि सुजिताकी आमालाई रुन नभनेको बताएका छन्।
गाउलेहरुले घटना स्थलबाट लखेटेको बिषयमा कसैले पनि उनलाई नलखेटेको र उक्त घटनास्थलमा पिडितपक्ष बाहेक जो आफन्त पनि हैनन् उनीहरु अलि बढी आक्रोशित भएपछि उक्त भिडबाट उनि आफै निस्किएको बताएका छन्।
उनि भन्छन “हो म प्रति गालि गलौज चै भएको थियो, अमानबिय ब्यबहार चै त्यहा गरेका थिए तर कसैले लखेर म लखेटिएको भने हैन र कतिपयले त कुटपिट गरेर भोजराज थापालाई पठाइयो धपाइयो भनेर। ‘
‘जसरी अहिले भोजराज थापालाई घटना स्थल बाट लखेटियो भनिएको छन् नि त्यो गलत सूचना प्रवाह भैरहेको छ। पिडित पक्षले मलाई वेलकम गरिरहनु भएको छ। हामीलाई मदत गर्न न्याय दिलाउन आउनुहोस, रिपोर्टिङ्ग गर्नुहोस भनेर पिडित पक्षले भनिरहनु भएको छ’ उनले भने।
पत्रकार भोजराज थापालाइ यसरी विभिन्न आरोप लागेपछि उनले आफु ठिक रहको, कसैले पनि आफुलाई नकुटेको, घटनास्थल बाट नलखेटिएको भन्दै सामाजिक संजालमा भ्रामक समाचार नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।
मृतक सुजिताकी आमाले आफुलाई भोजराजले रुन नभनेको र आफैले छोरीको खोजि गर्न आग्रह गरेको साथै घटनास्थलमा लागेका सबै आरोपहरु झुट हुन् बताएकी छिन। बाकी भिडियोमा हेर्नुहोला :